Eyona nto ibonisa ngayo ngokucoca indlu yakho
Coca indlu yakho uze ufumane uncedo lokukhusela ingxaki
Ngaba lixesha lokuhlawula ikhaya lakho? Imiboniso yee-TV ezinobuqhetseba ezidlulileyo zazidume kwii-2000s zakuqala. Eyona mininzi eyaziwayo yaphela kule minyaka elishumi. Oku kubonisa ukuba yizona zizinto ezintle kakhulu kumbono kwaye zingaba yimfundo kumbukeli kunokugxila ekuziphatheni. Ngelishwa, kunzima ukufumana kwimirhumo kwaye ayifumaneki ngokubanzi ukubukela kwi-Intanethi okanye ngeDVD.
Okwangoku, uhlobo oluthile luyathandwa kakhulu kwaye abantu abaninzi bakuthola ukukhuthazwa ukufunda kwiibali zalabo abaneengxaki zokugada.
"INdlu ecocekileyo" yenziwe kwi-Style Style kusukela ngo-2003 ukuya ku-2011. Umkhosi wokuqala wawungumNiecy Nash de kube yonyaka wokugqibela, owawusungulwa yiSpestt Bledsoe. Wahamba kunye neqela lakhe ukuze ancede abalondolozi bezindlu bavela kwi-clutter yabo. Eli qela libandakanya uMat Iseman njenge-Go-To-Guy, umququzeleli uLinda Koopersmith, abenzi bezinto eziquka uMark Brunetz, uDidi Snyder, noMichael Moloney kunye neengcali zentengiso yeeyadi kuquka uTrish Suhr, uJoel Steingold kunye no-Allan Lee Haff.
Lo mboniso wawunomdla kakhulu kwaye unamacebiso aluncedo ababukeli abanokuwusebenzisa ukuhlaselwa kwabo. I-crew ixoxisana nabanini bezindlu ukuba bathengise izinto kwivenkile yokuthengiswa ukuze baxhaswe imali yokubuyisela imali eyi-1000 yekhaya labo.
I-Style Style yabuyiselwa kwakhona njenge-Esquire Network ngo-2013 kunye ne-Clean House iziqendu azibonakali zifumaneka kwiwebhusayithi yazo, kwaye zibonakala zingekho kwiDVD. Izicatshulwa zidweliswe kwi-TVGuide.com kwaye nayiphi na i-airings ezayo iza kubalwa apha.
Oku kuboniswa, kwimizimba emininzi, yinto yokwenene yokucoca indlu ekhoyo ngoku. Iziqendu ziyafumaneka kwi-intanethi kwi-A & E.com. Ezi ziqendu zijolise kubantu abanenkinga yokunyanzelisa. Umboniso uthandwa kakhulu kwi-A & E.
Abanikazi bezindlu abanenkinga yokunceda banokuncediswa ngumfo wezifo zengqondo okanye isazi sengqondo, inzululwazi yombutho kunye neengcali zokucoca. Umboniso unika inkxaso yeenyanga ezintandathu ukwenzela ukuba umninikhaya aqhubeke nokunyanga kwaye athole uncedo ngokucoca nokulungiswa.
Ababukeli abanandiphayo mboniso bathi kubakhuthaza ukuba bahlambulule amakhaya abo kunye nokubenza bazive bebhetele malunga nobukhulu bezindlu zabo. Inokukhanyisa abantu abathile okanye iintsapho zabo ukuba bafumane unyango lwabo lokunyanzeliswa kwengxaki.
Uchungechunge oluqalwe ngo-2009 kwaye luye lwaqhubeka ngokuhlukahluka. Kaninzi "
"Ingcambu ecocekileyo" ibonwe ngamaxesha amabini kwi-network ye-TLC ukususela ngo-2003 ukuya ku-2005. Yayifomati efana ne "House House". Umncedisi, umququzeleli, umyili, kunye nomchweli uncedise intsapho ikhuphe phantsi kwe-clutter yayo. Bakhetha amakamelo amabini ukuguqula nokuhlalutya okuqukethwe kwi-Keep, Sell, kunye neToss. Emva koko babe negaraji lokuthengisa ngelixa iqela loyilo kunye nomchweli libuyisela amagumbi ngokugcina nokusebenza kangcono.
Ukususela kwi-TLC: "Kwinqanaba ngalinye, iqela lethu elinesihluku, kodwa lithenda, izazi ziza kunceda abanini bezindlu baguqule ngokucacileyo imimandla emibini kwindlu yabo kwiindawo zeentlekele ukuze zisebenze, zihlale zihleli ngokuzikhethela."
Imikhosi yayiyi-Stacey Dutton kunye neTavis Smiley, kunye nabaququzeleli uPeter Walsh noShelli Alexander. UPeter Walsh waqala inkwenkwezi kwi "Extreme Clutter" kwinethiwekhi ye-OWN.
I-HGTV ibhekiselele "Intlanganiso: Umbutho" ukususela ngo-2003 ukuya ku-2006. Umncedisi uGail O'Neill wanceda umninimzi ukuba ahlaziye igumbi lokulungisa ingxaki yabo kwaye ahlele ikhitshi, ibhedi, igumbi lokulala, okanye indawo yokuhlala. Wayesebenza kunye nabaququzeleli abaphezulu kunye nombukiso wawukhuthazayo ekufumaneni izisombululo zeengxaki zentlangano. Ngelishwa, omnye umboniso wokuthi awusayi kuvela emoyeni okanye kwi-intanethi. Kaninzi "
Kutheni Ufanele Uphephe Ukusebenzisa uLwimi Lobuhlanga
Funda nge-Rational Choice Theory